[Indlu kanokusho esanda kwakhiwa] I-Secret House (45 pyeong) ensimini ye-tangerine enendawo engaphakathi eningizimu-mpumalanga yeJeju
Pyoseon-myeon, Seogwipo-si, Jeju Province, i-South Korea
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-상현
Indawo yethu yezihambi iyindlu kanokusho ye-pyeong ethule futhi esesitayeleni etholakala e-Tosan-ri, eningizimu-mpumalanga ye-Jeju, ezungezwe amasimu e-tangerine.
Ihlotshiswe ngezesekeli ezinhle nezikhethekile kulo lonke igumbi lokuhlala negumbi lokulala, le ndawo inegumbi lokuphumula elibanzi, ikhishi, amakamelo okulala ama-3 nezindlu zokugezela ze-2. Ifasitela lekamelo lokuphumula libheke ingadi encane nezihlahla zezithelo ze-citrus.
Igumbi lokuphumula elibanzi elixhunywe ekhishini lifakwe i-TV enkulu engamayintshi angu-75, usofa wabantu abangu-4, izihlalo ezi-2 zomuntu oyedwa, netafula lokudlela labantu abangu-8.
Ngaphezu kwalokho, i-Samsung Air Dresser, iphrosesa yokudla ye-Hew-Rec, isihlanzi samanzi se-LG, i-Port Merion tableware, amasethi okulala kakotini, njll. zilungiselelwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi ungaphila ngokunethezeka njengokungathi usekhaya ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Sicela uchithe isikhathi sokuphumula nesijabulisayo endlini yezihambi enendawo enkulu nezinsiza ezinhle.
Ngokuhlala isikhathi eside kweviki elingu-1 noma ngaphezulu, sithola idiphozi egameni lezikweletu zezinsiza esikhundleni sokwehlisa izinga legumbi ngo-30-50% noma ngaphezulu. Uma ungena, ukhokha i-200,000 kuya ku-500,000 ewinile, futhi uma uphuma, uzobuyiselwa imali ngemuva kokukhokha imali oyisebenzisile kugesi/amanzi/ugesi.
Itholakala e-Tosan-ri, insimu ye-tangerine eningizimu-mpumalanga yeJeju.
IGaseoreum iseduze nendlu futhi ingafinyelelwa ngezinyawo, futhi phakathi nemizuzu eyi-10 ngemoto, kukhona iDarabi Oreum neMoose/Deer Deer Oreum.
I-Pyoseon Beach, i-Wimi-ri, i-Hallasan Dulle-gil, ne-Bijarim Forest kungakapheli imizuzu eyi-10 kuye kwengama-30.